တကယ်တော့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဟာတက္ကသိုလ်မှာအခက်ခဲဆုံးပါ - သတင်း
ငါ uni မှာများစွာသောအရာမြင်ကြရဲ့သူတစ်နှစ်နောက်ဆုံးပေါ် Software ကိုကျောင်းသား။ ဒီအကြောင်းကြောင့်ငါပြောနိုင်တာကတော့ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် Compsci ဟာအခက်ခဲဆုံးဘွဲ့ဖြစ်ပြီးမင်းတို့အားလုံးသိတယ်။
ရူပဗေဒကျောင်းသားတွေရဲ့ကန့်ကွက်သံကိုချက်ချင်းကြားနိုင်ပေမယ့်ကျွန်တော်ကြားရတယ်။ ဒီဂရီသည်စာရင်းနှင့်စာမေးပွဲများကိုဖတ်ရုံထက်မကပါ။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွင်စာဖတ်စာရင်းမပါရှိသော်လည်း၎င်းတွင်အဆက်အသွယ်အမြင့်ဆုံးနာရီနှင့်အပြင်းထန်ဆုံးစာမေးပွဲများရှိသည် - လူတို့သိသည်ထက်ကွန်ပြူတာသိပ္ပံဘွဲ့တွင်များစွာရှိသည်။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒီဂရီလွယ်ကူသောဘီလ်ဂိတ်စ်၊ မာ့ခ်ဇုကာဘတ်၊ စတိဗ်ဂျော့ဘ်နှင့်အီလက်စ့်တို့၏အောင်မြင်မှုများကြောင့် (မှားယွင်းစွာနားလည်မှုလွဲခြင်း) ရှိသည်။
အဘယ်သူသည်ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုကို clean up
၎င်းသည်အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ် ဦး သည်အကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြင့်ထုဆစ်နိုင်ပြီးအတူတူ hack နိုင်ပြီး Yahoo ကဒေါ်လာ ၃၀ သန်းဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာတောင်မှရော့ခ်ကြယ်ပွင့်ပုံရိပ်အနည်းငယ်တီထွင်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့ရိုးရှင်းစွာအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာရုံလူမှုရေးအရအေးမြမဟုတ်ပါဘူး။
ထိုအခါသင်ခန်းစာအခြားအရာတစ်ခုခုသည်။ Sudoku ပဟေlesိများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့် Java algorithm ကိုဒုတိယနှစ်တွင်ပထမဆုံးတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရန်နှစ်ပတ်ခန့်အချိန်ရခဲ့သည်။ မင်းအဲဒီလိုလုပ်နိုင်မလား? ငါတကယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။
အဲဒါတကယ်ပါ ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာ - အခြေခံအားဖြင့်ပိုပြီးအသုံးချနိုင်သောခေါင်းစဉ်ရှိသောကွန်ပျူတာသိပ္ပံ - တက္ကသိုလ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးမေးခွန်းအတွက်အဆုံးစွန်သောစကားပြောဆိုမှုကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းသည်သင်ဘာကိုလေ့လာသလဲ။
လန်ဒန်ရှိ Disney EMEA ၏ရုံးချုပ်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးဆွဲသူတစ် ဦး အဖြစ် ၁၂ လနေခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုကျွန်ုပ်အမေအားမည်သို့ရှင်းပြခဲ့သည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ သူမသည်သူမ၏ကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားစဉ်ကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ခဲ့သည်ကိုရှင်းပြနေစဉ်အနည်းဆုံးနိုးနိုင်သည်။ ကောင်းကြီးပေးကြလော့။
ကျွန်ုပ်၏ဘဝ၏အကောင်းဆုံး ၁၂ လတာကာလကိုဒစ္စနေး၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်နှင့်လိုင်စင်လုပ်ငန်းအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းစီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကို fix လို့မရပါ
ငါကဒီတစ်ခုအကြောင်းကိုအဘယ်သို့သောအကြောင်းမသိရပါဘူး, ဒါကြောင့်ငါကကူညီချင်ကြဘူးမဟုတ် - ငါစစ်မှန်စွာလို့မရပါဘူး။ စတင်သူများအနေနှင့်သင်ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲ၊ နောက်ဆုံးပေါ် Thrones (သို့) Leicester vs Spurs ဂိမ်းကိုခိုးယူရန်သင်ကြိုးစားခဲ့သည့်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် malware မည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့မဟုတ်ပါကသင့်ရဲ့ hard drive သို့မဟုတ် CPU ဖွင့်နေလျှင်၎င်းသည်ငါချောကလက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကဲ့သို့အသုံးဝင်သည်။
ငါဟာ့ဒ်ဝဲကောင်လေးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်အာရုံကြောကွန်ယက်ကိုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့တပ်ဖြန့်ထားသည့် Aero-bot အတွက်အများဆုံးပမာဏကိုတွက်ချက်နိုင်ခြင်း၊ သင်၏ browser ထဲတွင်လည်ပတ်နေသည့် 3D နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၊ နာရီတစ်လုံးသည်ရာသီဥတုကိုပြောပြနိုင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည် - သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုမပြုပြင်နိုင်ပါ။ တောင်းပန်ပါတယ် ၎င်းကိုပိတ်ပြီးထပ်မံကြိုးစားပါ။
ရူပဗေဒကျောင်းသားများ (အကြီးမားဆုံးညည်းတွားသူများအတွက်ဆုရှိခဲ့လျှင်) ခေါ်ဆိုမှုကိုကျွန်ုပ်ကြားနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ပြုလုပ်သောအဆိုးဆုံးသင်္ချာမှာ A-Level trigonometry ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမငြင်းပယ်သင်္ချာနှင့်သီအိုရီရူပဗေဒအချို့လှည်အက္ခရာသင်္ချာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဒီဂရီသင်စိန်ခေါ်ဖို့သင်္ချာရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလည်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် Law တွင်စာအုပ်များသည်အလွန်များပြားလှပြီးအချို့အရာများပေါ်တွင်စာမျက်နှာများကိုဖွင့်နိုင်သည်။ စာစီစာကုံးများသည်လည်းသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက်ကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာပေဌာနသည်စာစီစာကုံးနှင့် ပတ်သက်၍ စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသားခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုရင်ဆိုင်ကြရအောင်။ ဒီသင်တန်းတွေထဲကအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကတော့ဟောပြောပွဲတွေမှာနိုးနေဖို့ပဲ။ ထိုအခါငါအချို့သောသင်တန်းများမှာအားလုံးသောပို့ချချက်ရှိသည်ပင်မသေချာဘူး - ငါသည်သင်တို့ကိုငါကြည့်ရှုရုပ်ရှင်လေ့လာရေး။
ကြွင်းသောအရာကော? ဘာသာစကားများသည်ဟောပြောချက်ကိုပြောချင်သည်၊ သို့သော်မည်သူ့ကိုနောက်ပြောင်နေသည်။ ပြဇာတ်ကဘာမှမထူးခြားပါဘူး။ သမိုင်းနှင့်အင်ပါပိုတွင်ကွန်မြူနစ် Utopia ကဲ့သို့လူတန်းစားများစွာရှိသည်။ ဇီဝဗေဒကျောင်းသားများသည်ကပ်ပါးကောင်များ၏အိမ်ရှင်ကဲ့သို့စာမေးပွဲများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ စိတ်ပညာသည်မည်သည့်မိခင်ဘွဲ့ထက်မဆို ပို၍ ခက်ခဲသည်။ လူမှုရေးသိပ္ပံများအနေဖြင့်သတိပေးချက် - ငါ့ကြောင်သည်သင်၏ဘွဲ့ကိုလုပ်နိုင်သည်။
CompSci ဌာနပထမတန်းစား bantz
ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထွက်ခွာငါတစ်ခုတည်းသောပထဝီဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထဝီသည်မကြာခဏခဲယဉ်းသောအချိန်ရရှိသည်, သောငါမတရားသောသည်ထင်။ ငါမကျေနပ်သောညနေခင်း၌ B23 တွင်ထိုင်နေသည်၊ လေးမနက်ခင်းဆိုးရွားလှသည့် C ကုဒ်ကို 4am နံနက်စောစောတွင် Rosser နှင့် PJM နားနေခန်းများတွင်ထိုင်နေသည်။ ကျောင်းသားတစ် ဦး သင်နှင့်အတူထိုတွင်ရှိနေမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည် Geography ကျောင်းသားဖြစ်သည်။ သင်တွေ့ဖူးသမျှလှပသောရောင်စုံမြေပုံများ။
၎င်းသည်ကွန်ပြူတာသိပ္ပံဘွဲ့၏အခက်အခဲနှင့်ပင်အနီးကပ်ဆုံးသောတစ်ခုတည်းသောသင်တန်းဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်သကဲ့သို့လိုင်းများကိုကျော်မသွားဘဲအရောင်ခြယ်ခြင်းသည်သင်သင်ပေး။ မရနိုင်သောအရာသာဖြစ်သည်။